Photography ngu inkqubo kokubhala visual, imifanekiso yi-capturing ukukhanya rays kwi ukukhanya-elinovakalelo kokubhala medium (e. g.
Kunokwenzeka wayecinga ka njengoko ezimbini pursuits: Kukho dozens ezahluka-iintlobo photography. Ezinye iindawo kufuna u-ulwazi (umz yokubhalwa photography), kodwa phantse zonke photography ibandakanya efanayo ezisisiseko imigaqo yokufumana ecacileyo, focused umfanekiso nge-lens kwaye kwi kokubhala medium.
Banininzi iintlobo ikhamera
Elinolwazi photographers zithanda kuba ukhetho iikhamera kuba ngeenjongo ezahlukeneyo. Ezona ethandwa kakhulu uhlobo jikelele-injongo ikhamera ye-ethabatha high-umgangatho imifanekiso ingaba omnye umfanekiso reflex (SLR). Ukuba unomdla photography uza mhlawumbi ufuna ukuba eyakho i-SLR ikhamera. Esiqhelekileyo photography isebenzisa wefilim njengoko kokubhala medium, ngokucacileyo ngu a eyona nkqubo. Bale mihla photography ngu heavily geared ngakulo zedijithali photography, nto leyo zombane i-nkqubo. Kwi-noba uhlobo photography engundoqo kukuncedisa efanayo, njengoko illustrated kule (ko-esenziwe lula) ikhamera nkqubela: engaqondakaliyo yinxalenye ikhamera ingaba optical kwinto, I. e.
Indima lens ukuba bathabathe engenayo ukukhanya rays kwaye bend kubo ifomu ecacileyo umfanekiso kwi kokubhala medium. Isakhiwo se-lens imisa indlela kakhulu ukukhanya ngu mbindini kwaye ulwandiso le ibangela umfanekiso. Ukuqonda photography, kufuneka baqonde lenses. Njengazo zonke lobugcisa, ezilungileyo photography iza ngokuzama. Funda malunga ikhamera, funda malunga umboniso ukwakhiwa, kwaye senzo